केहि डाउनलोड गर्न सक्दैन
प्रश्न केहि डाउनलोड गर्न सक्दैन
2 वर्ष3सप्ताह पहिले #488 by Penzoil3
दर्ता, सबै डाउनलोड समय। निःशुल्क downloads- सबै समय। म महिनाको लागि केहि डाउनलोड गर्न सकेको छैन!
यो bleeping हास्यास्पद छ!
2 वर्ष3सप्ताह पहिले #489 by Dariussssss
कसरी लामो समय को लागि तपाईं समस्या छ?
2 वर्ष3सप्ताह पहिले #490 by Dariussssss
तपाईं आफ्नो ब्राउजर स्थापित कुनै पनि लिपि अवरुद्ध कुरा छ?
आफ्नो इन्टरनेट जडान जाँच, यो बाटो पनि यो लागि ढिलो हुन सक्छ।
म बिना कुनै पनि समस्या केहि डाउनलोड गर्न सक्छन्, त्यसैले म मुद्दा आफ्नो पक्षमा छ अनुमान।
हामीलाई थप जानकारी दिन प्रयास गर्नुहोस्।
2 वर्ष3सप्ताह पहिले #491 by Penzoil3
म धेरै महिना भन्नुभयो। म RIKOOOO अघि सम्पर्क गर्न attemptede, म पायो सबै gee हाम्रो सर्भर ठीक हो थियो। सबै पटक बाहिर म डाउनलोड, मुक्त वा सदस्य डाउनलोड दुवै प्राप्त गर्न अघि।
2 वर्ष3सप्ताह पहिले -2वर्ष3सप्ताह पहिले #492 by rikoooo
हाम्रो FAQ मा हामी हाम्रो डाउनलोड पोर्ट 8080 देखि पोर्ट 80 सट्टा दिइएको छन् व्याख्या गरेका छन्। त्यसैले, यदि तपाईंको पोर्ट 8080 Simviation.com केही डाउनलोड गर्न, किन प्रयास छ आफ्नो फायरवाल अवरुद्ध गरिएको छ थाहा गर्न simpliest तरिका? यदि त यो simviation र Rikoooo काम गर्दैन simviation, आफ्नो डाउनलोड त्यहि पोर्ट प्रयोग किनभने त्यसपछि यसलाई आफ्नो फायरवाल पोर्ट 100 ब्लक, छ 8080% पक्का। तपाईं आफ्नो फायरवाल मा एक नियम थपेर पोर्ट 8080 TCP / UDP खोल्न पर्छ।
त्यसपछि हरेक डाउनलोड हाम्रो वेबसाइट र पनि धेरै अन्य वेबसाइटहरु मा काम गर्नेछ।
अन्तिम सम्पादन:2वर्ष3हप्ता पहिले rikoooo.
1 वर्ष9महिना पहिले #700 by Penzoil3
यदि कसैले यो समस्या रिपोर्ट गर्दछ भने, तिनीहरूलाई मोडेम फायरवाल सेटिंग्स पूर्वनिर्धारितमा रिसेट गर्न भन्नुहोस्। मेरो समस्या आत्महत्या थियो।
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.429 सेकेन्ड